सबैजनालाई यँया: पुन्हीया भिन्तुना !
13th September 2019, 04:39 pm | २७ भदौ २०७६
नेपाल भाषाका महाकवि सिद्धिदास महाजुले भनेका थिए - 'भाषा म्वा:सा जाती म्वाइ' अर्थात् भाषा बाँचेमात्रै जाति पनि बाँच्छ।
भाषा बाँच्न त्यो भाषा बोल्न, लेख्न र बुझ्न जान्ने मानिसको आवश्यक्ता पर्छ। त्यसको अभावमा त्यो भाषासँगै जातिको अस्तित्व पनि लोप हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ।
एउटा भाषा तब लोप हुन्छ, जब त्यो भाषा बोलिने स्थानमाथि दोस्रो भाषा हावी हुन्छ। रैथाने भाषा बोल्न गाह्रो भएर वा सिक्न नचाहेर अन्य भाषा बोल्नेहरुले विस्तारै सो समुदायको भाषिक शब्दकोश नै परिवर्तन गरिदिन्छ।
उदाहरणका लागि काठमाडौंको माइतीघर।
हाल हामीले माइतीघर भनेर बोलाउने स्थानमा माइतीघर फिल्मको बोर्ड थियो रे। अनि कसैले कहाँ आउने भनेर सोध्दा माइतीघरको बोर्ड भएको स्थानमा भन्दै गर्दा सो स्थानको नाम माइतीघर रहन गयो भन्ने कथन पनि छ। तर, माइतीघर फिल्म बन्नु अघि सो स्थानको नाम नै थिएन होला त?
वास्तवमा सो स्थानको नाम हो – फिब्य ख्य।
सो क्षेत्रमा रहेको तुकुचासँगै फिब्य ख्य अजिमाको मन्दिर अहिले पनि छ। सोही अजिमाको नामले नै सो स्थानको नाम फिब्य ख्य रहेको बताइन्छ। तर, सायद बोल्न गाह्रो भएर होला वा अन्य केही कारणले मानिसले फिब्य ख्यलाई बिर्सिँदै गए। नेपाल भाषाबाट रहेको ठाउँको नामलाई नेपालीकरण गरियो, बिस्तारै सो ठाउँ माइतीघरले चिनियो। केशव स्थापितले त्यहाँ मण्डल बनाए। हामी नेपालीले फेरि त्यो स्थानको नामलाई भारतीयकरण गर्‍यौं, माइतीघर मण्डललाई माइतीघर मण्डला बनाएर।
यसरी कुनै अर्को भाषाले त्यहाँको रैथाने भाषा र शब्द परिवर्तन हुनुको मुख्य कारण हो 'कम्फर्ट अफ टंग' अर्थात जिब्रोको सजिलो लागि।
केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी हर्मा ओलीले गैडालाई 'राइनो' भनेकोमा आपत्ती जनाउँदै विदेशीहरुले आफ्नो 'कम्फर्ट अफ टंग' का लागि गैंडालाई 'राइनो' बनाएको आरोप लगाएका थिए। भलै एक सिंगे गैंडा नेपालमा मात्रै पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्दले काठमाडौं उपत्यकाको इतिहासमाथि गरिएको फेरबदल दर्साउँछ।
सायदै, त्यही जिब्रोको सजिलोको लागि कालान्तरमा 'यँ' काठमाडौं भयो। येँया: मा ठड्याइने य:सिं- लिंगो भयो। ठ:बही- ठमेल भयो। लुँ हिटी- सुन्धारा भयो। भींद्य: - भीमसेन भए। बिस्का: - बिस्केट भयो बुंगद्य:को रंग के रातो थियो – मछिन्द्रनाथको अगाडि रातो शब्द थपियो।
आज उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाइदै गरिएको येँया: पुन्ही पनि इन्द्रजात्राको नामले प्रचलित भयो। तर, धेरैलाई इन्द्रजात्रा भनेको कुमारीको रथ यात्रा, लाखे पुलुकिसीको रथ यात्रा भन्ने मात्रै ज्ञान भयो। नेवार समुदायमै कति येँया:का बारेमा अहिले यस विषयमा अनभिज्ञ छन्।
'यँ' अर्थात् 'इन्द्र' र या:' अर्थात् 'जात्रा'। आकाशको देवता इन्द्रको जात्रा चलाउने भएकाले नै यसलाई यँया भनिएको बताउँछन् संस्कृतिविद् तेजेश्वरबाबु ग्वंग। पछि अपभ्रंस हुँदै यँया: पनि येँया: भयो। धेरैले येँ (काठमाडौं) र या: (जात्रा) भएकाले येँयालाई काठमाडौंको जात्रा भने।
तर, ग्वंग भने यो काठमाडौंको मात्रै जात्रा नरहेको बताउँछन्। येँया काठमाडौंमा मात्रै नभइ उपत्यकाभर मनाइने भएकाले त्यसलाई काठमाडौंको मात्रै जात्रा भन्नु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ।
सरकारले इन्द्रजात्रा भनेर उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिन्छ। राष्ट्र प्रमुखको हैसियत राष्ट्रपति गद्दी बैठक पुग्‍छिन्। धेरैले इन्द्रजात्रामा कुमारीको रथ यात्रा गर्ने, लाखे, पुलुकिसी नचाउने बारेमा मात्रै थाहा होला। तर, उपत्यकाको चोकचोकमा इन्द्रलाई डोरीले बाँधेर बन्धनमा राख्दै प्रदर्शन गर्ने बारे थाहा नहुनसक्छ।
काठमाडौंमा मनाइने येँया:को किम्बदन्ती अनुसार स्वर्गलोकमा यज्ञका लागि पारिजातको फूल चाहियो तर त्यहाँ पारिजात फूल नभएपछि इन्द्रकी आमाले इन्द्रलाई फूल दिन पृथ्वी पठाइन्। एक शक्तिशाली राजकुमारका नाताले इन्द्र पृथ्वी लोकमा मानिसको भेषमा आए र यहाँका मानिसहरुको स्वीकृति बिना उनीहरूको जग्गामा फूल टिपे। आफूहरूको जग्गामा फूल चोरेको भन्दै इन्द्रलाई समाइ बाँधेर नगर परिक्रमा गराए। इन्द्रलाई बाँधेर नगरका विभिन्न क्षेत्रमा धुमाइएको प्रतीक स्वरूप इन्द्रजात्रा भर 'यमबा:द्य' राखिने प्रचलन रहेको छ। इन्द्रलाई बन्धनमा राखेपछि उसकी आमा दागिं इन्द्रको खोजीमा पृथ्वी आउँछिन्। इन्द्रलाई छोडदिए येँलाई उबर बनाउने वाचा गर्छिन्। त्यसका साथै वर्षभरी मृत्यु भएकाहरुलाई स्वर्ग लग्ने बताउँछिन्।
हालसम्म येँया पुन्हीको दिन राति दागिं निकालिने गरिन्छ। दागिंको पछाडि वर्षभरी मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्त दिवंगतहरुलाई इन्द्रलोकमा बास होस् भन्दै नगर परिक्रमा गर्ने गर्छन्। उनीहरु सबै इन्द्रदह गएर फर्कने गर्छन्। येँयासँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो बौमत। दागिंपछि सोही मार्ग हुँदै बौमत निकालिने गरिन्छ। दागिंले आफ्नो छोरालाई छोडिए स्वर्ग लग्ने भन्दै इन्द्रदह लगेकाहरुलाई बीच बाटोमै छोडी भागेकाले उनीहरुलाई खोज्न बत्ती बाल्दै निकालिने यात्रालाई बौमत भनिने प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धर बताउँछन्।
यता, भक्तपुरमा येँया:को कथा भने फरक छ। काठमाडौंमा पारिजातको फूल टिप्न आउँदा समाइएसँगै उसलाई बन्धनमा पारेर नगर परिक्रमा गराइएको प्रतीक स्वरूप येँया: मनाइन्छ। तर, भक्तपुरको कथन अनुसार इन्द्रका छोरा जयन्त पारिजातको फूल टिप्न आउँदा उसलाई समाइ राक्षसराज मूपात्र कहाँ लगिन्छ। मूपात्रले जयन्तको हात काटी नगरका विभिन्न स्थानमा पाता कसेर राखिन्छ। त्यसैको प्रतीक स्वरूप भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा यम्बा:द्य: ठ्डयाउने गरिन्छ। भक्तपुरमा भने इन्द्रका छोरा जयन्तलाई यम्बा:द्य: मान्ने चलन रहेको स्थानीय कृष्ण प्रजापतीले बताए।
मल्लकालमा कुमारीको रथ यात्रा प्रारम्भ
हुनत: गुणकामदेवको पालामा नै काठमाडौंमा कुमारी पूजा गर्ने चलन थियो। तर, इन्द्रजात्राको मुख्य आकर्षणको रुपमा रहेको जीवित देवी कुमारीको रथ यात्रा भने मल्लकालमा मात्रै सुरु भएको हो। त्यसैले पूर्व प्राध्यापक मानन्धर भने येँया:लाई मिश्रित किसिमको जात्राका रुपमा व्याख्या गर्छन्।
'येँया: र कुमारी जात्राको कथा नै फरक छ। कुमारीको पूजा पहिले नै हुने भएता पनि रथयात्रा भने कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लका पालमा सुरु भएको हो,' उनले भने, 'आफ्नै राज्यका भारदारहरुबाट षड्यन्त्र हुने थाहा पाएपछि जय प्रकाश गुहेश्वरीमा लुक्न पुगे। पछि फेरि उनले कान्तिपुर जिते। त्यसपछि उनले कुमारीका नाममा सिक्का प्रकित गर्नुका साथै कुमारीको रथ यात्रा चलाए।'
यस्तै, मानन्धर येँया: बौद्ध नेवारहरुको पर्व रहेको बताउँछन्। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन 'उपाकु वनेगु' भनेर बौद्ध नेवारहरु पाल्चामा बत्ती बाल्दै खड्ग आकारको नगर परिक्रमा गर्नेगर्छन्। उनका अनुसार उपाकु वनेगु पनि उपभ्रंस भएर बनेको शब्द हो। भन्छन्,' यसको मूल रुप उपाखा उले हो। उपाखा भनेको शहर हो भने उले भनेको घुम्नु हो।'
येँया: पुन्ही अर्थात आज पूर्णिमाको दिन कुमारीको रथ यात्रा हुने स्थानमा बौद्ध नेवारहरु पितृमोक्षका लागि बत्ती र धुप बाल्दै जाने गर्छन्। त्यस्तै पितृमोक्षकै लागि कुमारीको रथयात्रापछि इन्द्रकी आमा दागींको पछाडि सतबीउ छर्दै नगरपरिक्रमा गर्ने गरिन्छ। त्यसछि दिवंगतहरुको सम्झनामा पूर्वजहरुको सम्झनामा बौमत निकाल्ने परम्परा पनि रहेको छ।
यसबाहेक लाखे, पुलुकिसी, दी प्याखं, सवभक्कु नाच लगायत विभिन्न नाच र करिब ३० भन्दा गुठीहरुको संयुक्त सहभागितामा येँया: मनाइन्छ।
तर, ८ दिनसम्म मनाइने यति वृहत पर्वलाई इन्द्रजात्राका रुपमा एकदिन सीमित गरिँदा त्यससँग जोडिएका कयौ अमूर्त सम्पदाहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन्। कति गुठी र नाचहरु लोप भइसेका छन् भने मानिसहरुलाई येँया:को वास्तविक अर्थ बुझाउनै गाह्रो भइसकेको छ।
नेवार समुदायमा पनि येँया: को व्याख्यालाई लिएर देखिएको विवाद छ। यसलाई पनि सल्लाह गर्दै एउटा ठोस नतिजामा पुर्‍याउन सफल भए येँया: को सही विश्लेषण हुने सक्थ्यो।
हाललाई केही मिडियाले इन्द्रजात्रासँगै येँया: र लिंगोलाई विस्थापित गर्दै य:सिं लेख्न थालेका छन्। त्यो राम्रो सुरुवात हो। एकले अर्काको भाषा र संस्कृतिको सम्मान गर्दै अगाडी बढे पक्कै पनि नेपाललाई खुशी र समृद्ध बनाउन सकिन्छ। तर 'कम्फर्ट अफ टंग' कै लागि कुनै भाषामाथि अनुदार भए त्यसले नेपाललाई त समृद्ध र खुशी बनाउला तर त्यो भाषिक पहिचान बोकेको जाति पक्कै खुशी हुनेछैन।
अहिलेलाई सबैजनालाई येँया पुन्हीया भिन्तुना! (इन्द्रजात्राको शुभकामना)
सबैजनालाई यँया: पुन्हीया भिन्तुना ! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।